Ny fahatongavan'i TestFlight mankany macOS dia akaiky | Avy amin'ny mac aho
Ny fahatongavan'i TestFlight mankany macOS dia akaiky
Ignatius Room | | macOS Monterey, About us
Nanambara i Apple nandritra ny WWDC 2021 fa hitondra ny TestFlight amin'ny Mac ilay orinasa, ka hanamafisana ny tsaho efa nisy nandritra ny fotoana kelikely. Ny sehatra, izay misy amin'ny iOS sy tvOS amin'izao fotoana izao, dia mamela ny mpamorona Manolora mora foana ny kinova beta amin'ny fampiharana anao amin'ireo mpampiasa ivelan'ny App Store.
Araka ny lazain'ny 9to5Mac, efa akaiky ny fandefasana ny TestFlight ho an'ny macOS. Mpandrindra maro no nanamafy tamin'ny 9to5Mac fa efa afaka nandefa rindranasa macOS natsangana niaraka tamin'ny Xcode 13 beta ho an'ny App Store Connect, iraka tsy azo atao taloha hatramin'ny macOS Monterey mbola tsy misy io ary tsy misy TestFlight ho an'ny Mac koa.
9to5Mac dia afaka nanamafy tsy vitan'ny hoe azo atao izao ny mandefa rindranasa amin'ny Xcode 13 beta mankany amin'ny App Store Connect, fa koa ireo mpamorona afaka manomana azy ireo amin'ny TestFlight izy ireo. Ny safidy TestFlight dia miseho ankehitriny ho an'ny fampiharana macOS ao amin'ny App Store Connect, sehatra ampiasain'ny mpamorona hitantanana ny fangatahana rehetra natolony an'i Apple.
Raha vantany vao manasa mpampiasa iray hisintona fampiharana beta ho an'ny macOS ny mpamorona, ny mpampiasa dia mahazo mailaka avy amin'i Apple miaraka amina rohy hametrahana ny kinova Mac an'ny TestFlight. Saingy, amin'izao fotoana izao, ny rohy dia mizotra mankany amin'ny pejy lehibe amin'ny vavahadin'ny developer Apple, milaza fa mbola miasa i Apple mba hampisy azy io.
Ireo mpampiasa nasaina hitsapana ny fampiharana macOS beta dia afaka mijery ilay fampiharana amin'ny kinova iOS an'ny TestFlight. Ny antsipirian'ny fampiharana beta dia manamarina izany mila Mac ny mpampiasa fa tsy fitaovana iOS hametraka izany fampiharana izany.
Tsy mbola nanamafy i Apple rehefa mikasa ny hanangana amin'ny fomba ofisialy ny TestFlight ho an'ny macOS, fa izy rehetra kosa midika izany fa mety ho tonga amin'ny mpamorona Mac tsy ho ela ny fampiharana. Hatreto dia mbola tsy namoaka fanavaozam-baovao ho an'ny macOS Monterey na Xcode 13 beta i Apple hatramin'ny 11 Aogositra, izay mety hanondro fa manomana famoahana kinova miaraka amin'ny TestFlight izy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny fahatongavan'i TestFlight mankany macOS dia akaiky
Miaraka amin'i Shining Girls ho lead koa i Amy Brenneman
Ny iMac M1 reconditioned an'i Apple dia tonga tao amin'ny tranokalan'i Espana